Bambalwa abantu bazi ukuthi bahumushe ezisusela olimini lwesiLatin nguyenhanh Prorsum - kahle, kunalokho, ukuthi bahumushe ingxenye ibinzana "ngokuqhubekela phambili" yesibili. Umlando waleli brand has eminyakeni engaphezu kuka-150, futhi uma kwekhulu lama-20 uphawu ekhulwini kwakubhekwa njengesibusiso umphakeli amasu ka zokugqoka izinceku ezempi kanye civil, 70s kwekhulu elidlule nguyenhanh Prorsum baziswa kuphela phakathi football hooligans, manje abadumile 'oxube okubi nokuhle' brand kubhekwa benchmark of a ukuphila enhle futhi uphawu okunethezeka. Nguyenhanh ukhiqiza konke kusuka umphakathi abeza nambitha zakudala ababegqoke amajazi kanye amajazi ukuba aqondise izicathulo, izikhwama, futhi yebo, kwezimonyo namakha. Futhi uma umsunguli indlu fashion ukuqagela kuphela ngalokho uzokwenza ukusaphazela kokusungulwa owamlandela phakathi ubulili fair, wayezoba kweso ocebile.
Ngakho, unyaka ngamunye yonke isizini eMilan Paris, kanye ezweni of sha - eLondon ukuthatha beka isethulo amaqoqo entsha nguyenhanh, kwezimonyo namakha kusukela brand imfashini ngokushesha uthatha Amakhasi ehola omagazini fashion sibonga azwakale kamtoti ukukhangisa umkhankaso. Kwaphela iminyaka eminingi, ubuso sha uyisibonelo abasha phezulu Kara Delevin - futhi ngimelwe ayavuma le angenele akhethwe kahle kakhulu: uhlobo Kara ihlangabezana UK esiqinile nobuhle fresh. Umklami Christophe House nguyenhanh Bailey ukholelwa yesimanje izimonyo isitayela brand eyamukelekayo kakhulu: imibala oyisibopho efudumele, ukuthungwa ecebile kanye nendoda egcwele flavour umzila - lena izici bokuthi isikhathi zakudala.
Ngakho, yini imikhiqizo nguyenhanh Prorsum bafanelwe ukunakwa kakhulu emakethe yethu? Okokuqala, flavour. Wochwepheshe bathi: "Ukuthwala nguyenhanh badinga kuphela onazo." Lokho, ukuthenga isikhwama lo mugqa, kubalulekile ukuba sigqoke wena ukunambitheka. Ngakho, i-inkanuko kakhulu futhi eduze umzimba kubhekwe ngamakha nguyenhanh umzimba, Bluff kanye isitimela runaway ka Beat ku inhliziyo hits ngqo, kahle, amadoda ngeke asondele aqabulayo iphunga Ezemidlalo.
Ingxenye best kulabo kufanele izimonyo nguyenhanh njengesipho - i emaphaketheni yasekuqaleni futhi kuyabiza, okungadingi ngisho ofuna ukuphrinta. Lezi izindlela ngeke ivumelane yiluphi uhlobo sibonga kwesikhumba ukuze Ukwakheka hypoallergenic, futhi umugqa kuhlanganisa izinto bonke ubudala. Kodwa izethameli eziqondiwe izimonyo Yiqiniso, abasha ibhizinisi nowesifazane umfundi - ngisho intengo umkhiqizo alunakukubangela izikhalazo.
Ngokwesibonelo, beauticians Mascara Ukwakheka zihlanganisa glycogen eziqukethwe izimila zasolwandle. Ngakho, eyelashes ngayinye inikwa amandla yi futhi Uqinisa, ngaleyo ndlela ukuvikela yena ngokumelene uthuli nobukhali izakhi Umbala. Uwela Mascara ngobumnene futhi ngaphandle izigaxa, sengathi esigubuzele nemivimbo engu. Enjalo emangalisayo brasmatiku ningoni ukuthenga emthunzini nguyenhanh - Sheer iso ithunzi, senziwe imibala romantic and soft. Kuthathwa kube enenzuzo kakhulu ukwakheka isitayela nude engxenyeni engenhla ubuso nokusetshenziswa lipstick umbukwane abomvu.
Ekhuluma izindebe: ubuso velvet lipstick kusuka nguyenhanh uyaphinda amabili Nymph osemusha okuthiwa Kara. Collection lipsticks kuhlanganisa ncamashi nedlanzana shades nemfashini efudumele zazo esigama for imibala yasekwindla, lapho isakhiwo kufaka akhiphe ewusizo rose okhalweni. Bangaki lezimanga presents nguyenhanh yayo Prorsum kubanikazi?
Indlela yokwenza izimonyo zakho Cleopatra?
"Tru Cover": ukubuyekezwa mayelana ukhilimu
Kenzo - nothingo kwabesilisa nabesifazane: impendulo. Eau de toilette Kenzo
Emabhulashini "Louis" - kukhethwa ochwepheshe
Finnish okudayisa uchungechunge namanje enhloko-dolobha. Amakheli "Stockmann" eMoscow
Sipheka vareniki ngeklabishi ukuze sidle umndeni wonke
UTamagotchi ozwakalayo wabuya
"Umkhaya wami", Windows Phone: oyifisayo. Ukubekwa "Umndeni wami" ku-Windows Phone
Ngobani moralfagi nokuthi kungani ungathandi?